Yimalini i-strava - sesha izixazululo
Ingabe kufanelekile ukukhokhela i-strava? Kuvela ukuthi iStrava Summit ikubonakalise kakhulu ukuthi ikufanele. Manje njengoba sengazi ukuthi iziphi izici ezingafakwanga enguqulweni ejwayelekile, angicabangi ukuthi ngingahle ngiyeke ukubhalisa kwami ​​kwe-premium. Izici zami ezisetshenziswa kakhulu yimisebenzi ehambisanayo, ilog yokuqeqesha, ne-GAP.
izingxenye ezibukhoma ze-strava
Izingxenye ezibukhoma ze-Strava - isixazululo se
Ingabe izingxenye ezibukhoma ze-strava zisebenza ukugijima? Ukukhethwa kwamasegmenti abukhoma wezigaba kutholakala kuphela ekusebenzeni nasekugibeleni imisebenzi. Izinhlobo ezimbili zamasegimenti zizosetshenziswa ngesikhathi sokuhlangenwe nakho kwakho kwamaSegmenti abukhoma: okudumile nokunenkanyezi. 2021.
Ukuqapha kokushaya kwenhliziyo kwe-strava
IStrava monitor rate - izixazululo ezintsha
Yibaphi abahloli bezinga lokushaya kwenhliziyo abasebenza nge-strava? I-Strava iyahambisana namadivayisi amaningi we-GPS aqopha idatha yokushaya kwenhliziyo, kufaka phakathi i-Garmin, i-Fitbit, i-Apple Watch, i-Wahoo, i-Polar, ne-Suunto, ne-TomTom. 17 2021.
Isivivinyo samahhala se-strava
Isilingo samahhala se-Strava - izimpendulo ezinkingeni
Isivivinyo samahhala se-strava isikhathi eside kangakanani? izinsuku ezingama-60
I-Strava yezempi - izixazululo ezisebenzekayo
Ingabe amasosha angayisebenzisa iStrava? I-heatmap ye-Strava futhi imele umsebenzi wokuqoqeka wabasebenzisi eminyakeni eminingana kuze kufike ku-Septhemba 2017. Lokho kusho ukuthi akekho umuntu ongayisebenzisa ukulandelela ukugada kwamasosha noma abahlaziyi abahamba ngezisekelo ze-CIA ngesikhathi sangempela.
strava thola imizila
IStrava thola imizila - izixazululo ezi-pragmatic
Ngiyihlola kanjani imizila kudeskithophu ye-strava? Okulandelayo, vula iStrava bese uthepha inkinobho ethi 'Hlola' ezansi, bese uthepha ku-'Hlola Imizila '. Lokho kuzovula ikhasi elizoqala ukucabanga ngempilo imizuzwana embalwa, likubonise umbono womhlaba. Emasekhondini ambalwa kamuva izobuya nemizila emithathu, ngokuya ngamapharamitha wokuzenzakalelayo phezulu ekhasini. 23.03.2020
imephu yokushisa yomhlaba we-strava
I-Strava global map map - izixazululo ezisebenzayo
Yini i-Heatmap yomhlaba wonke eStrava? I-Global Heatmap I-heatmap ikhombisa 'ukushisa' okwenziwe yimisebenzi ehlanganisiwe, yomphakathi ngonyaka odlule. I-heatmap ibuyekezwa njalo ngenyanga. Umsebenzi owenziwa ngabasubathi njengobuyimfihlo awubonakali. Abasubathi bangakhetha ukuphuma ngokubuyekeza izilungiselelo zabo zobumfihlo. Izindawo ezinomsebenzi omncane kakhulu zingakhombisa 'ukushisa.'
inembe kangakanani i- strava
Inembe kangakanani i- strava - sesha izixazululo
Kungani i-strava inganembi kangaka? Idivayisi yakho kungenzeka ukuthi ilahle nje ukuxhumana neziphuphutheki ze-GPS futhi ayirekhodanga idatha. Umsebenzi wakho we-Strava kungenzeka awunamephu, khombisa umugqa oqondile ohlanganisa amaphuzu akho okuqala noma wokugcina noma umakwe ngokuzenzakalela njengomsebenzi wasendlini. Idivayisi yakho kungenzeka iqophe amaphuzu e-GPS aphambuka endleleni yakho eyiqiniso. 2021.
izinganekwane zendawo ze-strava
Izinganekwane zasendaweni yaseStrava - izixazululo ezihlala njalo
Kusho ukuthini ukuba yinganekwane yasendaweni eStrava? Impumelelo ye-Local Legend (LCL) inikezwa umsubathi ogcwalisa ingxenye enikezwe kakhulu esikhathini esinezinsuku ezingama-90 kungakhathalekile ijubane noma isivinini.
Amabalazwe we-Strava - izixazululo ezingaba khona
Ingabe i-strava inamamephu? I-Strava inikeza amabalazwe amabili wokubuka imisebenzi yakho kuwebhusayithi ye-Strava: Standard kanye ne-Satellite. Izithombe zesathelayithi zitholakala kwaDigitalGlobe, NASA, nakuMapbox. Amamephu asebenzisanayo kuhlelo lokusebenza lweStrava asebenzisa iGoogle Maps neApple Maps ngezinhlelo zokusebenza ze-Android ne-iOS ngokulandelana. 8 2021.
Izici ze-strava premium
Izici ze-Strava premium - izimpendulo nemibuzo ejwayelekile
Uyini umehluko phakathi kwe-strava free ne-premium? I-Strava inenguqulo yamahhala futhi ekhokhelwayo inguqulo ekhokhelwayo, iStrava Summit, ekunika ukufinyelela kuzici eziningi. IStrava Summit ibiza u- $ 5.00 ngenyanga, noma u- $ 59.99 ngonyaka. Uhlobo lwamahhala lweStrava lunikeza ukulandelwa komsebenzi, okuphakelayo kwemithombo yezokuxhumana, amandla okuthola imicimbi yokuqina kwendawo, nokuningi. 2020.
strava amadivayisi ahambisanayo
Amadivayisi ahambisana ne-Strava - izimpendulo ezilula zemibuzo
Yikuphi izinhlelo zokusebenza ezivumelanisa ne-strava? Ukulayisha noma ukuvumelanisa kusuka kwamanye amasayithi wokufaneleka ku-StravaGarmin Connect.MapMyRun.MapMyRide.Runkeeper.3
I-Strava gap - izixazululo ezisebenzayo
Kwenzekani ngeGap on Strava? I-STRAVA kubonakala sengathi isuse esinye isici sabasebenzisi abangakhokhi njengoba kusobala ukuthi kunesifiso sokuthi iningi lethu lisekele ngokwezimali insizakalo ye-STRAVA yokwenza imali. 2020.
isigaba se-strava climb
Isigaba sokukhuphuka kwe-Strava - ungakufinyelela kanjani
Yiziphi izigaba zokuqwala? Isigaba 4: Kukhuphuka ngamamitha angama-250 kuye kwangama-500 ekukhuphukeni kokuzuza.Isigaba 3: Kukhuphuka ngamamitha ayi-500 kuye kwangama-1,500 ekukhuphukeni kwesigaba.Isigaba 2: Kukhuphuka ngamamitha ayi-1,500 kuye kwayi-3,000 ekukhuphukeni kokuphakama Isigaba 1: Kukhuphuka ngamamitha angu-3 000 kuya ku-5 000 ekuphakameni kokuphakama.
umsebenzi wefulegi we-strava
Umsebenzi wefulegi le-Strava - izixazululo ezihlala njalo
Kwenzekani uma umaka umsebenzi we-strava? Uma umsebenzi wakho umakiwe kusho ukuthi umsebenzi wakho ukhonjwe njengokwephula izinkombandlela zebhodi yabaphambili yesigaba ngokutholwa okuzenzakalelayo noma ngomunye umgijimi waseStrava. Imisebenzi emakiwe ngeke ivele kumabhodi wabaphambili esegimenti. 28. 2021.
i-heatvaap yomuntu siqu
IStrva imephu yomuntu siqu - sizixazulula kanjani
Yini i-heatmap strava?
Ama-hashtag we-Strava - incwajana ebanzi
Ngabe ama-hashtag asebenza ku-Strava? Kufanele ubekezele. Ngokungafani namanye ama-social media, ku-Strava, awukwazi i-hashtag nethemba labalandeli abaningi; awekho ama-Strava-bots laphaya.
ibhodi yabaphambili yokudla
Ibhodi yabaphambili ye-Strava - indlela yokubhekana nayo
Ngibona kanjani amabhodi wabaphambili e-Strava? Ukubuka konke kwebhodi yabaphambiliKusuka ekhasini lomsebenzi, skrolela ezansi udlule imephu ukuthola izingxenye ezifanelane nomsebenzi.Khetha ingxenye ukuze ubone lawo mabhodi wabaphambili.
i-strava vs mapmyride
I-Strava vs mapmyride - indlela yokubhekana
Ngingasebenzisa iStrava neMapMyRide ngasikhathi sinye? Ukuze udlulisele imisebenzi yakho kusuka kwi-MapMyRide iye e-Strava, uzodinga ukuthekelisa imisebenzi ngazinye kusuka ku-MapMyRide bese uyilayisha ku-Strava kusuka ekhasini lethu lokulayisha. Iya kumsebenzi ku-MapMyRide. QAPHELA: amafayela angalayishwa ngobuningi ku-Strava ngamaqembu angafika kuma-25.
Izindlela ze-Strava - ungabhekana kanjani nazo
Yikuphi okungcono iStrava noma iKomoot? Umsubathi ofuna ukuqhathanisa nabanye kanye nomncintiswano nakanjani ungcono eStrava. IKomoot isetshenziselwa kakhulu ukushintshanisa emphakathini kanye nogqozi lapho uhlela umzila